Ndezvipi “Zvivi Zvinomwe Zvakaipisisa”—Ko Zvirimo Here muBhaibheri?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Pane “Zvivi Zvinomwe Zvakaipisisa” Here?
Bhaibheri haritauri kuti pane “zvivi zvinomwe zvakaipisisa.” Kunyange zvakadaro, rinodzidzisa kuti kuva netsika yekuita zvivi zvakakura kunoita kuti munhu atadze kuwana ruponeso. Semuenzaniso, Bhaibheri rinotaura nezvezvivi zvikuru zvakadai seunzenza hwepabonde, kunamata zvidhori, kuita zvemidzimu, kufufutirwa nehasha, uye kudhakwa richizviti “mabasa enyama.” Rinobva razoti: “Vane tsika yokuita zvinhu zvakadai havazogari nhaka youmambo hwaMwari.”​—VaGaratiya 5:19-21. *
Bhaibheri haritauri here ‘nezvezvinhu zvinomwe zvinosemesa Tenzi’?
Ehe, rinotaura nezvazvo. Maererano neBhaibheri Rinoera, Zvirevo 6:16 inoti: “Kune zvinhu zvitanhatu zvinosemesa Tenzi. Zvinomwe zvinomumisa mwoyo.” Kunyange zvakadaro, Zvirevo 6:17-19 painotaura mienzaniso yezvivi zvacho, hazvirevi kuti inenge ichidonongodza zvese. Asi inotaura zvikwata zvikuru zvinomiririra marudzi ese emabasa akashata, kusanganisira aya anoita zvekufungwa, zvekutaurwa uye zvekuitwa. *
Mashoko ekuti “chivi chinourayisa” anorevei?
Mune dzimwe shanduro dzemaBhaibheri mashoko aya anowanika pana 1 Johani 5:16. Semuenzaniso, Bhaibheri Dzvene rinoti: “Pane chivi chinourayisa.” Mashoko akashandurwa kuti “chivi chinourayisa” anogonawo kushandurwa kuti “chivi chinounza rufu.” ‘Chivi chinounza rufu’ chakasiyana papi ‘nechivi chisingakonzeri rufu’?​—1 Johani 5:16.
Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti chivi chese chinoguma nerufu. Kunyange zvakadaro, tinogona kuponeswa pachivi nerufu kuburikidza nechibayiro cherudzikinuro chaJesu Kristu. (VaRoma 5:12; 6:23) Nokudaro, “chivi chinounza rufu” ndechiya chisingafukidzwi nechibayiro chaKristu. Munhu anoita chivi cherudzi urwu anenge akatsunga kurarama achiita chivi zvekuti haambofa akachinja mafungiro ake kana kuti maitiro ake. Bhaibheri rinotaurawo nezvechivi chakadaro sechivi ‘chisingakanganwirwi.’​—Mateu 12:31; Ruka 12:10.
Ko nyaya iyi yezvivi zvinomwe zvakaipisisa yakabvepi?
“Zvivi zvinomwe zvakaipisisa” zvakabva pazvinhu zvisere zvainzi ndizvo zvakanyanyisa kuipa. Izvi zvakatangwa mumakore ekuma300 C.E. nemumwe murume aidavira muzvinhu zvisinganzwisisiki ainzi Evagrius Ponticus, uye zvinhu zvaaidzidzisa zvakazonyorwa nemumwe mumongi airarama upenyu hwekuzviomesera ainzi John Cassian. Mumakore ekuma500 C.E. Papa Gregory I vakachinja zvinhu zvisere zvakaipa chaizvo zvakanyorwa naCassian, vachizviita zvivi zvinomwe zvakaipisisa, kana kuti zvakakura chaizvo, zvedzidziso yeRoma Katurike zvinoti: kudada, kuda pfuma zvakanyanya, kuchiva, godo, makaro, hasha, uye usimbe. Gregory aiona zvinhu izvi sezvivi zvakakura mukuti zvimwe zvivi zvese zvinobva pazvinhu izvozvo.
^ ndima 3 Zvinhu zvinotaurwa pana VaGaratiya 5:19-21 semienzaniso yezvivi zvakakura hazvisirizvo chete, nekuti pashure pekutaura zvinhu izvozvo, Bhaibheri rinozowedzera mashoko ekuti, “nezvinhu zvakaita seizvi.” Nokudaro, muverengi anenge achikurudzirwa kuti ashandisewo pfungwa dzake kuona zvinhu zvingava zvisina kunyorwa ipapo asi “zvakaita seizvi.”
^ ndima 5 Zvirevo 6:16 ine muenzaniso wedimikira rechiHebheru iro rinosimbisa nhamba yechipiri kuburikidza nekuisiyanisa neyekutanga. Matauriro akadai anowanika kakati kuti mumagwaro.​—Jobho 5:19; Zvirevo 30:15, 18, 21.